ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်ဖန်လုံအိမ်ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်စက်ရုံ - Jianda
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Greenhosue စနစ်များ > အအေးစနစ် > ဖန်လုံအိမ်အဘို့အဝါသနာရှင် System ကို
ဖန်လုံအိမ်အဘို့အဝါသနာရှင် System ကို
ဖန်လုံအိမ်၊ push-Pull Exhaust ပန်ကာအတွက်အအေးပန်ကာစနစ်ကိုလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းလေဝင်လေထွက်နှင့်အအေးတို့တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်း၊ ကြက်အိမ်၊ မွေးမြူရေး၊ ဖန်လုံအိမ်၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊ အထည်အလိပ်စသည်တို့အတွက်အသုံးပြုသည်။
က) အပူချိန်မြင့်မားခြင်း (သို့) အနံ့ဆိုးအလုပ်ရုံများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ဥပမာ - အပူကုသစက်ရုံ၊ သတ္တုစပ်စက်ရုံ၊ ပလပ်စတစ်စက်ရုံ၊ လူမီနီယံစက်ရုံ၊ ဖိနပ်စက်ရုံ၊ သားရေစက်ရုံ၊
ခ) အလုပ်သမားများအသုံးပြုသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ဥပမာအဝတ်အထည်စက်ရုံများ၊ အမျိုးမျိုးသောတပ်ဆင်အလုပ်ရုံများ၊ အင်တာနက်ကဖေးများ၊
(ဂ) ဥယျာဉ်ခြံဥယျာဉ်ခြံ၊ လေဝင်လေထွက်အအေးခံခြင်း၊
)) အအေးခံရန်နှင့်စိုထိုင်းဆအချို့သောလိုအပ်မှုအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ ဝါဂွမ်းစက်ရုံ၊ ဇာထိုးစက်ရုံ၊ ပိုးရက်စက်ရုံ၊ ခြေအိတ်စက်ရုံနှင့်အခြားအထည်အလိပ်စက်ရုံများစသည့်ချည်မျှင်များ၊ သိုးမွေးစက်များ၊ လျှော်စက်များ၊ ရက်ကန်းစက်များ၊
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအမျိုးအစားဖန်လုံအိမ်နှင့်ကြက်အိမ်အတွက်အအေးခံပန်ကာ။ ထူထဲသောသွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ၂၇၀ ဂရမ်သွပ်ရည်ဖြည့်ထားသောသံမဏိ ၃၀၄ ပြားဘောင်ဘောင်များ ၀.၈ မီလီမီတာရှိသည်။ပန်ကာတစ်ခုသည်လေးလံသောသံတူဖွင့်စက်ပါ ၀ င်ပြီးအလွယ်တကူဖွင့်နိုင်ပြီးပိတ်နိုင်သည် 0.45မီလီမီတာ အထူ။ အခြားတစ်ဖက်ခြမ်းကိုယ်ရံတော်ပိုက်ကွန်သည်
2. ကုန်ပစ္စည်း ပrameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)
ဖန်လုံအိမ်၏အဓိက parameter သည်များအတွက်အအေးပန်ကာစနစ်:
H ကို * W * T က
၁) ။ ပန်ကာ Box: ခိုင်ခံ့သောသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ။
2) ။ Fan Blade Material: သံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်း၊
3). Shutter Material: Strong Galvanized sheet-steel. Automatic (လေစီးကြောင်း ဖိအား) open-close system.
၅) Casting Aluminium Propeller စက်သီး။
၆) unassemble ရရှိနိုင်ပါသည်
ဖန်လုံအိမ်၊ ကြက်အိမ်၊ စက်ရုံ၊
Cooling fan system for greenhouse,thick zinc coating 270gms galvanized sheet , stainless steel 304 sheet housing frame are available, 0.8မီလီမီတာ thickness.ပန်ကာတစ်ခုသည်လေးလံသောသံတူဖွင့်စက်ပါ ၀ င်ပြီးအလွယ်တကူဖွင့်နိုင်ပြီးပိတ်နိုင်သည် 0.45မီလီမီတာ အထူ။ အခြားတစ်ဖက်ခြမ်းကိုယ်ရံတော်ပိုက်ကွန်သည်.
Stainless steel 430 propeller type ဓါးသွား, 1380မီလီမီတာ industrial workshop exhaust fan, poultry farm cooling fan , greenhouse wall mounted air ventilation system.
မော်တာ စွမ်းအား and belt drive နည်းလမ်း, Type B belt imported from Japan, ensure long service life.
Siemens မော်တာနှင့်တရုတ်နာမည်ကျော်မော်တာများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ 220V / 380V / 460V, 50hz / 60hz, 1phase / 3phase ။ပေါ့ပါး။ တုန်ခါမှုနည်းသောပန်ကာခါးပတ်နှင့်အနားကွပ်ကိုအလူမီနီယမ် - မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းဖြင့်သေစေခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအသွင်အပြင်နှင့်အတွင်းပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှုများကိုဖယ်ရှားပေးရန်အတွက်ပေါက်ကွဲမှုမှကာကွယ်ခြင်း
Jianda Greenhouse ကုမ္ပဏီမှဆလတ်၊ စတော်ဘယ်ရီအတွက်အလွှာ Hydroponics မှတစ်ဆင့် A-type စိုက်ပျိုးခြင်းမြောင်း၊ groove, groove၊ လည်ပတ်ခြင်းနှင့်စုံစမ်းခြင်းများပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှကြိုဆိုပါသည်။
hot Tags:: ကုန်ကြမ်းစက်၊ စက်ရုံ၊ လက်ကားရောင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ အရည်အသွေး၊ စျေးနှုန်းချိုသာသော၊ လျှော့စျေး၊ စိတ်ကြိုက်စျေးပေါ၊ ထုတ်လုပ်ထားသောစျေး၊ စျေးနှုန်း၊ ဈေးနှုန်း၊ CE၊ ၁၅ နှစ်အာမခံ